Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် (ရေ)ရှိ စစ်ရေယာဉ်အသစ်များ
Posted by MM at 11:05 PM
sanaythar July 17, 2012 at 12:43 AM
Thank for new post ko mm. ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်းမှာ ၅စီးရီးတွေထုတ်ပါတယ်။ Hull ပိုင်း၊ Body ပိုင်းတွေပါပဲ၊ လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပိုင်းကိုတော့ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်းမှာသာ အပြီးသတ်တပ်ဆင်တယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ။
sanaythar July 19, 2012 at 11:35 PM
အသစ်ဆောက်လုပ်သောကျန်စစ်သားက ကျွန်တော်တို့အတွက် ရေတပ်ခေတ်သစ်ပဲလို့ပြောရမလားပဲ။ သာမာန်ရဟတ်ယာဉ်အတက်အဆင်းကတော့ ယခင်ရေယာဉ်များမှာ(အင်းတော်၊ အင်းယာ၊ ၇၇၁၊ ၇၇၂၊ F-11 မှာလည်း ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Hanger ပါ ပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ စစ်ရေယာဉ်နှင့်အတူ တစ်ပါတည်းလိုက်ပါတာဝန်ထမ်းရတော့မယ့် သဘောပါ။ ပင်လယ်ပြင်ကင်းထောက်မယ်။ ရှာဖွေကယ်ဆယ်မယ်။ လေကြောင်းပစ်ကူချေမှုန်းမယ်။ မိခင်ယာဉ်ကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေအပြင် လေယာဉ်ကိုတောင်ပစ်ချနိုင်မယ့်၊ ရေငုပ်သင်္ဘော ရှာဖွေထောက်လှမ်းပေးနိုင်မယ့် ရဟတ်ယာဉ်မျိုးဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲ။ Sea King တို့လို မိုးထဲလေထဲ၊ မုန်းတိုင်းထဲ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါကောင်းသော ရဟတ်ယာဉ်မျိုး တစ်အုပ်စာလောက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုရေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ တစ်စီးစာ Hanger ပဲဖြစ်မှာပါ။ ရေယာဉ်ပေါ်မှာ လှိုင်းထဲလေထဲအတူလိုက်ပါနိုင်ဖို့ဆိုတာ နည်းပညာအားဖြင့် မြင့်မားမယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ ရေတပ်အင်ဂျင်နီယာများကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်။ Hanger ထဲမှာ အခြေအနေမျိုးစုံအတွက် Stability ရနိုင်ဖို့ ရပ်ထားနိုင်ဖို့ နည်းပညာလိုအပ်ပါတယ်။ Hanger ရှိရင် Flight Control/ Flight Desk လည်းပါဝင်လာနိုင်/လာသင့်ပါတယ်။ Hanger ထဲမှာ ခဲယမ်းများနဲ့ စက်ပြင် Workshop ပါတွဲပါရပါမယ်။ တွဲဖက်ထားမယ့် ရဟတ်ယာဉ်အတွက် Crew လုံလောက်စွာပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ထိခိုက်ပျက်စီးလာရင် တစ်ခါတည်းပြင်နိုင်ရမယ်။ စစ်ဆင်ရေးလိုအပ်ချက်အတိုင်း လက်နက်ကိုသင်္ဘောပေါ်မှာတင် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးနိုင်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် သူ ပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီး လေတပ်စခန်းကို သွားနေရမှာပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့် Navy Seals အဖွဲ့ငယ်တစ်ဖွဲ့ကို လက်နက်ကိရိယာအဆင့်မြင့်မားစွာနဲ့ ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းထားဖို့ သင့်ပါပြီ။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ရေပြင်၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ရေယာဉ်သွားလာမှုနေရာတွေ၊ ကမ်းလွန်ရေနံစင်ပေါင်းများစွာ၊ လုပ်ကွက်ပေါင်းများစွာ၊ ခြိ်မ်းချောက်မှု အားကောင်းလာတဲ့ ပင်လယ်ဓါးပြရန်ကနေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေယာဉ်များစွာကိုပါ နိုင်ငံ့ရေပြင်ပိုက်နက်အတွင်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာကာကွယ်နိုင်ဖို့ အရင်နှစ်များနဲ့မတူပဲ တိုးတက်မှုများစွာဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ တပ်မတော်ရေအတွက် သားကြီးတစ်ယောက်လိုအားကိုးအားထားရမယ့် စစ်ရေယာဉ်တစ်စီးပေါ်ထွက်လာမှာကို ၀မ်းသာနေပါတယ်ခင်ဗျား။
xwal July 20, 2012 at 2:37 AM
ကျန်စစ်သား ဖရီးဂတိတ် ရဲ့အရှည်က ၁၅၀ မီတာဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်.. သေချာသိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးနိုင်မလား...
tak ladosh July 20, 2012 at 5:14 AM
"UMS Aung Zeya and other warships.
Burma's first frigate Aung Zeya has been launched ceremoniously by Vice-Senior General Maung Aye but was soon found out that its design was highly flawed and risky in high seas, prompting the regime to hastily order three frigates from China. Aung Zeya was built jointly by Burma and North Korea. North Korea has armed the frigates with its missiles, and the naval exercise was to test the efficacy of North Korean missiles and to prepare for war with Thailand. Col. Moe Aung is currently the Tactical Fleet Commander of those frigates."
DADLUS August 3, 2012 at 12:09 PM
THE design flaw was false. it was exaggerate by the opposition media. you can tell that by using the words like "regime" and other words like " to prepare for war with "Thailand". those are the usual words that an opposition media used foralong time. And the Myanmar generals are not that stupid to testaDPRK missile on their own sea. And you asked only about the design , but not about the missile and the cooperation of DPRK. That mean u believe what u choose to believe . U writeacomment/ question in english , and this isablog that use burmese language primarily, so ifaforeigner see ur comment/question ,what will he think? Because he can't understand the other words and he'll see only ur comment .So for ur information , don't trust everything u see on the internet like u just asked.This isadisgrace for our beloved navy and our country.( sorry KO MM , but i can't take that kind of stuff anymore)